by malikDecember 30, 20190 Comments
Ukuhlolwa kwe-PET kwalowo owayenguNdunankulu uNawaz Sharif kwenziwa ngoMsombuluko emtholampilo yangasese eLondon, kanti kulindeleke ukuthi kube nemibiko yezempilo kuleli sonto.
UNawaz Sharif ubehambisana nodokotela wakhe uqobo uDkt Adnan, indodana kaHussain Nawaz, osebenzela uNasir Butt nezinye izikhulu esibhedlela lapho afike wahlolwa khona udokotela.
Ngenkathi ekhuluma nabezindaba, uHusssain Nawaz uthe isimo sempilo sikaNawaz sisesibi futhi nemibiko yakhe yezokwelapha ayikhombisi nakancane ukuthuthuka.
NgoDisemba 24, ngokubona kwesinqumo seNkantolo eNkulu yase-Islamabad (IHC), lowo owayenguNdunankulu uNawaz Sharif nomndeni wakhe banxuse uMnyango Wezasekhaya uPunjab ukuthi wandise isikhathi sakhe sebheyili.
Ngokusho kwemithombo, inkantolo yayalele uMnu Sharif ukuthi afake isicelo kuhulumeni wasePunjab ukuze athole olunye usizo ngaphansi kwesigaba 401 (2) seCode of Criminal Procedure (CrCP), ka-1898.
Kwamenyezelwa yi-IHC ukuthi ngaphandle kokuthi uhulumeni wesifundazwe athathe isinqumo ngalolu daba ngenkathi enza lolu hlelo, futhi ibheyili likaSharif lizohlala lide lize linqunywe ngenye indlela yiziphathimandla zesifundazwe. Ngokomyalo wenkantolo, uMnu uSharif angafaka isicelo sokwengezwa kwebheyili kuhulumeni wasePunjab.
Ngo-Oct. 29, iNkantolo eNkulu yase-Islamabad (IHC) yamisa isigwebo salowo owayenguNdunankulu uNawaz Sharif ngezinsizakalo zokwelashwa amasonto ayisishiyagalombili ecaleni lesitatimende se-Al-Azizia. Inkantolo yayimyalele ukuthi afake izibopho ezimbili zama-Rs2 million umuntu ngamunye enkantolo ukuze kudedelwe ukukhishwa kwakhe.
Icala lokufaka isicelo sebheyili lifakwe nguMongameli we-PML-N uShehbaz Sharif ngomfowabo uNawaz, owayephethwe esibhedlela saseLahore's Services Hospital. Inkantolo ibuye yamemezela ukuthi kuzokwandiswa uhulumeni wasePunjab ukuze anwetshwe ngebheyili.
Ngo-Oct. 25, uMnu Nawaz uthenge ibheyili ngezizathu zokwelashwa kuleli cala eliqhubekayo leChaudhry Sugar Mills ovela eNkantolo eNkulu yaseLahore. UNdunankulu wangaphambilini waletha amabhondi amabili okuqinisekiswa abiza u-Rs10 million umuntu ngamunye ukukhishwa kwakhe kuleli cala.
UMongameli we-PML-N, uShehbaz Sharif, ufake isicelo sebheyili sokuthi kudedelwe umfowabo esitokisini seNational Accountability Bureau (NAB).
"Sifake isicelo sebheyili ngesizathu sokuthi isimo sakhe sezempilo siwohloka futhi udinga ukwelashwa okungcono," kusho ummeli wakhe, u-Azam Nazir Tarar, etshela abeReuters ngemuva kwesinqumo.
NgoNovemba 19, uMnu. .
UMnu Sharif namalungu omndeni wakhe bake babonisana nodokotela abaningana, kubandakanya nalabo abagxile kakhulu ezithweni zenhliziyo kanye nokulimazeka komzimba.
Ijaji elibusayo, u-Mohammad Arshad Malik, ngonyaka owedlule, wagweba umhlaka-24 kuDisemba, wagwetshwa nguMnu. USharif esitokisini se-Al-Azizia. USharif ugwetshwe iminyaka eyisikhombisa ejele esitokisini se-Al-Azizia ngenhlawulo ezimbili - Rs1.5 billion no- $ 25 million. Ukungafaneleki kweminyaka eyishumi ekubeni ebambe noma yiliphi ihhovisi lomphakathi nakho bekuyingxenye yesigwebo.